OTU ESI EMEPỤTA MA HAZIE IHE NKESA FTP NA TFTP NA WINDOWS 7 - ESI EMEPE, JIKỌỌ, WỤNYE, IHE KPATARA NA Ọ NWERE IKE Ọ GAGHỊ ARỤ ỌRỤ, NTỤZIAKA NA NTANETỊPỤ - WINDOWS - 2019
Otu esi emepụta ma hazie FTP na TFTP sava na Windows 7
Ị nwere ike ime ka ọrụ dị mfe na kọmputa na njikọ Windows site na netwọk mpaghara site na ịgbalite FTP na TFTP sava, nke ọ bụla nwere àgwà nke ya.
Esemokwu FTP na TFTP sava
Ịmepụta na ịhazi TFTP na Windows 7
Mepụta ma hazie FTP
Video: FTP Setup
FTP nbanye site na onye nyocha
Ihe kpatara ya nwere ike ghara ịrụ ọrụ
Otu esi ejikọta dịka netwọk netwọk
Mmemme nke atọ iji hazie ihe nkesa ahụ
Ị rụọ ọrụ ma ndị sava ahụ ga-enye gị ohere ịkekọrịta faịlụ na iwu n'etiti kọmputa ma ọ bụ ngwaọrụ ejikọrọ na ibe ha karịa netwọk mpaghara ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ.
TFTP bụ ihe nkesa dị mfe iji mepee, ma ọ akwadoghị nkwenye ọ bụla ọzọ karịa nyocha ID. Ebe ọ bụ na ID nwere ike iwepụ, TFTP enweghị ike ịtụle ya, ma ha dị mfe iji. Dịka ọmụmaatụ, a na-eji ha hazie ọrụ ọrụ diskless na ngwaọrụ netwọk smart.
Sava FTP na-arụ otu ọrụ dị ka TFTP, ma nwere ikike iji nyochaa njirimara nke ngwaọrụ ejikọtara site na iji nbanye na paswọọdụ, ya mere, ha nwere ntụkwasị obi karị. Site n'enyemaka nke ha ị nwere ike izipu ma nata faịlụ na iwu.
Ọ bụrụ na ngwaọrụ gị ejikọrọ na redio ma ọ bụ jiri ọkụwall, ị ga-ebu ụzọ gaa n'ọdụ ụgbọ mmiri 21 na 20 maka njikọ abata ma na-apụ apụ.
Iji rụọ ọrụ ma hazie ya kachasị mma iji usoro free - tftpd32 / tftpd64, nke nwere ike ibudata na ebe nrụọrụ weebụ na otu aha. A na-ekesa ngwa ahụ n'ụdị abụọ: ọrụ na mmemme. A na-ekewa ụdị ọ bụla n'ime nsụgharị maka usoro 32-bit na 64-bit. Ị nwere ike iji ụdị ọ bụla na mbipute nke usoro ihe omume kachasị adaba gị, ma dị ka ihe atụ, ihe omume dị na 64-bit na-arụ ọrụ dị ka mbipụta ọrụ ga-enye.
Mgbe ibudatara usoro ihe omume ịchọrọ, wụnye ya ma malitegharịa kọmputa gị ka ọrụ ahụ malite na ya.
Enweghị ntọala n'oge echichi na mgbe ọ gasịrị, ọ gaghị agbanwe ma ọ bụrụ na ịnweghị mgbanwe ọ bụla. Ya mere, mgbe ịmalitegharịrị kọmputa ahụ, ọ bụ iji malite ngwa ahụ, lelee ntọala ahụ, ma ị nwere ike ịmalite iji TFTP. Naanị ihe dị mkpa ka a gbanwee bụ folda echere maka ihe nkesa ahụ, ebe ọ bụ na ndabara, a na-echekwa D niile maka ya.
Tọọ ntọala ndabara ma ọ bụ dozie ihe nkesa maka onwe gị
Iji nyefee data na ngwaọrụ ọzọ, jiri tfp 192.168.1.10 GET filename_name.txt iwu, na iji nweta ngwaọrụ site na ngwaọrụ ọzọ - tftp 192.168.1.10 PUT filename_.txt. Iwu niile ga-abanye na akara iwu ahụ.
Iwu mmegbu iji gbanwee faịlụ site na nkesa
Gbasawanye panel panel.
Gbaa ogwe ntụziaka ahụ
Gaa na ngalaba "Mmemme".
Gaa na ngalaba "Mmemme"
Gaa na ngalaba "Mmemme na Atụmatụ".
Gaa na ngalaba "Mmemme na components"
Pịa na taabụ "Kwado ma gbanyụọ components."
Pịa bọtịnụ "Kwado ma gbanyụọ components"
Na windo gbasaa, chọta IIS Ọrụ osisi ma rụọ ọrụ niile n'ime ya.
Mee ka osisi "IIS Ọrụ" rụọ ọrụ
Zọpụta ihe ma chere maka ihe ndị agbanyere agbakwunyere site na usoro ahụ.
Chere ka a ga-agbakwunye components ahụ site na usoro ahụ.
Gaa na ngalaba nchịkwa isi ma gaa "Ngalaba na Nche" ngalaba.
Gaa na ngalaba "System and Security"
Gaa na nchịkwa "nchịkwa".
Gaa na ngalaba "nchịkwa"
Mepee usoro ihe omume IIS.
Meghee usoro ihe omume "IIS Manager"
Na windo ahụ apụta, gaa osisi dị n'akụkụ aka ekpe nke usoro ihe omume ahụ, pịa aka nri na folda "saịtị" ma gaa na "Tinye FTP saịtị" ọrụ.
Pịa na ihe "Tinye ebe FTP"
Dejupụta ubi na saịtị aha ma depụta ụzọ na folda nke a ga-eziga faịlụ a.
Anyị na-emepụta aha saịtị ahụ ma mepụta nchekwa maka ya.
Ịmalite ntọlite ​​FTP. Na adreesị IP adreesị, tinye "Oghere niile", na mpaghara SLL ahụ bụ "enweghị SSL." Ibu ọrụ "Run FTP saịtị" na-akpaghị aka "ga-ekwe ka ihe nkesa na-ebido onwe ya mgbe ọ bụla a gbanyere kọmputa ahụ.
Anyị setịpụrụ ihe ndị dị mkpa
Nyocha na-enye gị ohere ịhọrọ nhọrọ abụọ: aha - enweghị nbanye na paswọọdụ, nkịtị - na nbanye na paswọọdụ. Lelee nhọrọ ndị dabara gị.
Họrọ ndị ga-enweta saịtị ahụ
Ihe okike nke saịtị ahụ na-agwụ ebe a, ma a ghaghị imekwu ntọala ụfọdụ.
Site kere ma gbakwunye na ndepụta
Gaa na Ngalaba System na Nchebe ma si ebe ahụ gaa na mpaghara nke Firewall.
Mepee ngalaba "Firewall Windows"
Mepee nhọrọ di elu.
Gaa na ntọala dị elu nke firewall.
N'akụkụ aka ekpe nke usoro ihe omume ahụ, mee ka taabụ "Iwu maka njikọ abata" ma rụọ ọrụ "FTP server" na "okporo ụzọ FTP na-agafe agafe" site na ịpị aka na ha ma kwuo "Kwado" oke.
Kwado ọrụ "FTP server" na "FTP na ihe ntanetịime okporo ụzọ"
N'akụkụ aka ekpe nke usoro ihe omume ahụ, mee ka taabụ "Iwu maka njikọ na-apụ apụ" ma malite ọrụ "FTP Server Traffic" na-eji otu usoro ahụ.
Kwado ọrụ "FTP server"
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịmepụta akaụntụ ọhụrụ, nke ga-enweta ikike niile iji jikwaa ihe nkesa ahụ. Iji mee nke a, laghachi na ngalaba "nchịkwa" ma họrọ ngwa "Kọmputa" na ya.
Mepee ngwa "Management Computer"
Na "Ngalaba mpaghara na otu", họrọ "folda" otu folda ma malite ịmepụta otu ọzọ n'ime ya.
Pịa bọtịnụ "Mepụta otu"
Dejupụta mpaghara niile achọrọ na data ọ bụla.
Dejupụta ihe omuma banyere otu a
Gaa na folda nchekwa ọrụ ma malite usoro nke ịmepụta onye ọrụ ọhụrụ.
Pịa bọtịnụ "Njikwa Ọhụrụ"
Dejupụta mpaghara niile achọrọ ma mezue usoro ahụ.
Dejupụta ozi onye ọrụ
Mepee njirimara nke onye ọrụ ahụ mepụtara ma gbasaa taabụ "Òtù Otu". Pịa bọtịnụ "Tinye" ma gbakwunye onye ọrụ na otu nke e kere obere oge.
Pịa bọtịnụ "Tinye"
Ugbu a gaa na folda ahụ e nyere maka iji ọrụ FTP. Mepee aha ya ma gaa na "Nche" taabụ, pịa bọtịnụ "Change" na ya.
Pịa bọtịnụ "Dezie"
Na windo meghere, pịa bọtịnụ "Tinye" ma gbakwunye otu nke e kere na mbụ.
Pịa bọtịnụ "Tinye" ma gbakwunye ìgwè ahụ e kere na mbụ
Nye ikikere niile na otu ị banyere ma chekwaa mgbanwe gị.
Debe igbe nche n'ihu ihe ikike niile
Gaa na IIS Manager wee gaa ngalaba na saịtị ị kere. Mepee "FTP ikike Rules" ọrụ.
Gaa na "FTP ikike iwu" ọrụ
Pịa bọtịnụ òké aka nri na oghere efu n'ime ihe ndị ọzọ gbasaa ma họrọ ọrụ "Tinye Iwu Ikike".
Họrọ ihe "Tinye Iwu Ikike"
Lelee "Ọrụ a kapịrị ọnụ ma ọ bụ ọrụ dị iche iche" wee jupụta n'ọhịa na aha aha otu aha. Ikwenye dị mkpa ịnye ihe niile: gụọ na ide.
Họrọ ihe "Akpọrọ Akụkụ ma ọ bụ Otu Njikọ Otu"
Ị nwere ike ịmepụta iwu ọzọ maka ndị ọrụ ndị ọzọ site na ịhọrọ "Ọrụ niile amaghị aha" ma ọ bụ "Ndị ọrụ niile" na ya ma tinye ikikere na-agụ naanị ka onye ọ bụla ma e wezụga gị nwere ike idezi data echekwara na ihe nkesa. Emeela, na nke a na okike na nhazi nke ihe nkesa ahụ zuru ezu.
Mepụta iwu maka ndị ọrụ ndị ọzọ.
Iji banye na ihe nkesa e kere eke site na komputa a na-abanye na kọntaktị kọmputa site na netwọk mpaghara site na onye nyocha ọkọlọtọ, ọ bụ ezuru ezipụta adreesị ftp://192.168.10.4 n'ọhịa maka ụzọ ahụ, yabụ ị ga-abanye n'enweghị aha. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye dịka onye ọrụ ikikere, tinye adreesị ftp: // aha njirimara gị: [email protected]
Iji jikọọ na nkesa ahụ site na netwọk mpaghara, mana site na Ịntanetị, a na-eji otu adreesị ahụ eme ihe, ma nọmba 192.168.10.4 dochie aha saịtị ahụ ị kere n'oge gara aga. Cheta na iji jikọọ na Ịntanetị, nke a na-enweta site na onye ntanetị, ị ga-ebufe ọdụ ụgbọ mmiri 21 na 20.
Ndị sava ahụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na ịnwetụbeghị usoro niile dị mkpa akọwapụtara n'elu, ma ọ bụ tinye data ọ bụla na ezighi ezi, debe ihe niile ahụ. Ihe nke abụọ kpatara ọdịda bụ ihe ndị ọzọ: ihe arụzizighị ekwenti, Firewall wuru n'ime usoro ma ọ bụ antivirus nke atọ, nkwụnye ohere, na iwu edobere na kọmputa ahụ na-egbochi ọrụ nke ihe nkesa ahụ. Iji dozie nsogbu metụtara FTP ma ọ bụ nkesa TFTP, ịkwesịrị ịkọwa ya n'ụzọ ziri ezi na ọkwa ọ pụtara, naanị mgbe ị nwere ike ịchọta ngwọta na forums isiokwu.
Iji tọghata nchekwa wepụtara maka ihe nkesa na netwọk netwọk site na iji usoro Windows, ọ bụ iji mee ihe ndị a:
Right-click na "My Kọmputa" akara ngosi ma gaa na "Map Map Drive" ọrụ.
Họrọ ọrụ "Jikọọ netwọk netwọk"
Na windo gbasaa, pịa bọtịnụ "Jikọọ na saịtị ebe ị nwere ike ịchekwa akwụkwọ na ihe oyiyi."
Pịa bọtịnụ "Jikọọ na saịtị ebe ị nwere ike ịchekwa akwụkwọ na ihe oyiyi"
Anyị na-awụpụ niile peeji nke a "Dee ọnọdụ nke weebụsaịtị" ma dee adres nke nkesa gị na akara, mezue ntọala mwube ma mezue ọrụ ahụ. Emere, nchekwa nchekwa ahụ na-agbanwe na ụgbọala netwọk.
Kọwaa ebe nke weebụsaịtị
Usoro ihe omume maka ijikwa TFTP - tftpd32 / tftpd64, ka a kọwawo n'elu na isiokwu dị na "Ịmepụta na Ịhazi TFTP Server". Iji jikwaa sava FTP, ị nwere ike iji usoro FileZilla.
Mgbe i mechara nwụnye ngwa ahụ, mepee menu "File" ma pịa mpaghara "Njikwa saịtị" iji dezie ma mepụta ihe nkesa ọhụrụ.
Gaa na ngalaba "Njikwa saịtị"
Mgbe ị rụchara ọrụ na ihe nkesa ahụ, ị ​​nwere ike ijikwa njikwa niile na ọnọdụ nyocha ihu abụọ.
Na-arụ ọrụ na FTP server na FileZilla
A na-ahapụta sava FTP na TFTP ka ịmepụta saịtị na saịtị ọha na eze na-ekwe ka faịlụ na iwu ka a kenye òkè n'etiti ndị ọrụ nwere ohere na ihe nkesa ahụ. Ị nwere ike ịme ihe niile dị mkpa iji rụọ ọrụ nke usoro ahụ, nakwa site na ngwa ndị ọzọ. Iji nweta uru ụfọdụ, ịnwere ike ịmepụta nchekwa na ihe nkesa na netwọk netwọk.